Macaashyada Laba Geesoodka Ah | UnitedHealthcare Community Plan: Medicare & Medicaid Health Plans
Wax ka ogow macaashyada laba geesoodka ah ee qorshaha caafimaadka, iyo sida loo qaabeeyay si ay u caawiyaan dadka. Context link
Dhibcaha lagu iibsado badeecooyinka iyo raashiinka caymiska leh ee OTC oo lagu helo si lacag la'aan ah waa faa'iido qiimo leh oo ka caawineysa xubnaheena qorshaha caafimaadka laba-geesoodka ah inay fidiyaan dollarkooda
Eeg qaybaha ka midka ah caymiska ilkaha, si aad u ogaato waxa aad ka fikirayso ee ku saabsan caymiska daryeelka ilkaha markaad haysato Medicaid iyo Medicare labaduba.
Ogow farqiga u dhexeeya qorshaha HMO iyo PPO, sababta dooqaaga dhakhaatiirta muhiim u yahay oo eeg inuu dhakhtarkaagu ku jiro shabakadayada.
Eeg sida loo isticmaalo 2022 liiska diiwaanka daawada ee qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah ee loo qalmi karo, iyo sida loo hubiyo nooca daawoyinka Medicare Part D ee laga yaabo inuu daboolo qorshaha caafimaadkaaga.
Wax ka ogow adeegyada daryeelka caafimaadka habdhaqanka iyo macaashyada caafimaadka dhimirka ee ay bixiyaan qorshayaasha caafimaadka laba geesoodka ah ee DSNP.
Caawimada lagu bixinayo lacagta aaladaha maqalka waa macaash qiimo leh oo laga helo qorshayaasha caafimaadka laba geesoodka ah oo badan
Qorshayaasha caafimaadka laba geesoodka ah ee loo qalmi karo (D-SNPs) ayaa laga yaabaa inay ku jiraan macaashyo dheeraad ah sida caymiska maqalka iyo caawimaada lagu bixinayo lacagta aaladaha maqalka.
Sida qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah ee loo qalmi karo (D-SNP) uu u caawin karo dadka qaba sonkorowga
Qorshayaasha caafimaadka laba geesoodka ah ee loo qalmi karo ayaa bixiya macaashyo badan oo dheeraad ah kuwaasoo gacan kageysan kara inay fududeeyaan maaraynta sonkorowga iyo caawimaada bixinta kharashka agabka sonkorowga iyo cuntada caafimaadka leh.
Sharaxaadda Medicaid. Medicaid waa barnaamij daryeel caafimaad oo dawladeed oo loogu talagalay dadka dakhligoodu hooseeyo. Waxa barnaamijka Medicaid yahay iyo waxa Medicaid daboolo.
Jiheeyaha ayaa xubnaha u fududeyn kara qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah.
Maxay ka dhigan tahay in la haysto Jiheeye Mintid ah oo maxay qabtaan Jiheeyeyaasha si ay ugu fududeeyaan dadka u-qalma macaashka laba geesoodka ah ee Medicaid iyo Medicare labaduba si ay u helaan taageero?
Daryeelka caafimaadka ee fogan araga ah (Telehealth) waa dheef waxtar badan leh oo laga helo qorshayaasha caafimaadka laba geesoodka ah oo badan.
Telehealth iyo telemedicine waxay kaa caawin karaan inay kuu fududeeyaan in dhakhtar uu kugu daaweeyo si lacag la'aan ah.
Qorshayaasha caafimaadka laba geesoodka ah inta badan waxaa ku jira kaalmo gaadiid-raac oo lacag la'aan ah.
Dadka haysta Medicaid iyo Medicare labaduba, qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah ayaa laga yaabaa inuu kugu siiyaan gaadiid-fuul si lacag la'aan ah si wax looga qabto baahiyaha caafimaadkaaga. Ku hel gaadiid-fuul si lacag la'aan ah.
Haddii aad hesho qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah, miyaad waayi doontaa macaashkaaga Medicaid Context link
Dadka haysta Medicaid iyo Medicare labaduba, qorshaha caafimaadka laba geesoodka ah ayaa kuu oggolaanaya inaad sii hesho macaashyada Medicaid oo dhan oo waxaa dheer inaad hesho macaashyada Medicare ee dheeraadka ah sidoo kale.
Daawooyinka dhakhtarku qoro ma lagu daboolaa qorshayaasha caafimaadka laba geesoodka ah Context link
Qorshayaasha caafimaadka laba geesoodka ah waxaa ku jira caymiska daawada dhakhtarku qoro oo badan marka lala barbardhigo Medicaid ama Medicare keligiis. Eeg liiska daawooyinka ay daboolaan qorshayaasha caafimaadka laba geesoodka ah ee laga heli karo halka aad ku nooshahay.
5 macaashyada la yaabka leh ee qorshayaasha caafimaadka laba geesoodka ah.
Caymiska aragga: Si dhow u fiirso waxa ay bixiyaan qorshayaasha caafimaadka laba geesoodka ah.
Ikhtiyaarada caymiska daryeelka aragga ayaa la sharraxay si ay kaaga caawiyaan inaad si buuxda u fahamto noocyada daryeelka aragga ee lagu daboolo qorshayaasha caafimaadka ee loogu talagalay dadka haysta Medicaid iyo Medicare labaduba.
Waa maxay Qorshaha Laba Geesoodka ah ee Dadka Qaba Baahiyaha Gaarka ah (D-SNP) Context link